‘ब्युटिफूल’ नायिका उपासनाको लोभलाग्दो फड्को [तस्बिर] – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. ‘ब्युटिफूल’ नायिका उपासनाको लोभलाग्दो फड्को [तस्बिर] – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
‘ब्युटिफूल’ नायिका उपासनाको लोभलाग्दो फड्को [तस्बिर]
चलचित्र ‘क्याप्टेन’बाट यो क्षेत्रमा उदाएकी नायिका ठकुरीले अभिनय गरेको चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ले बक्स अफिसमा कमालको व्यापार गर्न सफल भयो । करिब १० करोडको हाराहारीमा व्यापार गरेको चलचित्रबाट नायिकाको काम पनि समीक्षक र दर्शकले रुचाए । नायिका सिंहलाई ‘क्याप्टेन’मा काम गर्दा धेरैले विभिन्न खालको टिकाटिप्पणी गरेका थिए । कसैले उनलाई मोटी भने, कसैले नायिकाको लागि फिट नरहेको भनेर टिप्पणी गरे । नायिका ठकुरी भन्छिन्–‘हामीले चलचित्रको पर्दामा वास्तविक जीवनका मानिसको पात्र चित्रण गर्ने हो । यसैले, कसैलाई पनि उसको शारीरिक वनावट हेरेर मुल्यांकन गर्नु गलत हो ।’
उनको चलचित्रले बक्स अफिसमा धमकेदार व्यापार मात्र गरेको छैन, उनले दर्शकको मन आफ्नो कामले पनि जितेकी छिन् । यसैले, त उनलाई अबको आशा लाग्दी नायिका भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । चलचित्र क्षेत्रमा नायिकाको स्टारडम पछिल्ला बर्षमा चाडो परिवर्तन भैरहेको छ । प्रियंका कार्कीको नम्बर १ को पोजिसन नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले उछिनिन् । प्रियंकाले जति चाडो सफलता पाइन्, त्यती नै चाडो आफ्नो स्थान पनि गुमाइन् । साम्राज्ञीलाई पनि अहिले नम्बर १ को स्थान जोगाउन गाह्रो परिरहेको छ । यसैले, पनि नायिकाहरुको पोजिशनमा आएको फेरबदलले उपासनालाई अगाडि ल्याउन सक्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको December 24, 2020 December 24, 2020 255 Viewed